TOP NEWS: Safiirka DFS ee Cumaan Abdirisaq oo laga guddoomay warqadihii safiir – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Safiirka DFS ee Cumaan Abdirisaq oo laga guddoomay warqadihii safiir
by admin 12th November 2015 0122
Suldaanka Saldanada Cumaan Suldaan Qaboos bin sa’id al sa’id ayaa maanta oo arbaca ah kuna beegan 11/11/2015 ka guddoomay waraaqaha aqoonsiga Safiirka JFS u fadhiyi doona dalka Cumaan Danjire/Abdirizak Farah Ali (Taano).
Safiirka ayaa salaan sharaf kaga qaatay qasriga Suldaanka Cutubyo ka tirsan ciidanka muusikada salaanta ee dalka cumaan, kadibna wuxuu ka sii aaday carshiga suldaanka halkaas oo looga guddoomay waraaqaha aqoonsiga.
Intaas kadib Safiirka JFS mudane C/risaaq Faarax Cali (Taano) wuxuu fadhi laqaatay Suldaanka saldanada Cumaan Suldaan Qaboos Bin Sa’id isaga oo u gudbiyey salaan uu uga siday Madaxwaynaha JFS mudane Xassan Shiikh Maxamuud.
Sidoo kale Suldaanka ayaa isna salaan u faray madaxwaynaha, Intaa kadib Suldaanka iyo Safiirka ayaa kawada hadlay xoojinta cilaaqaadka labada dal ee walaalaha ah.
Kulanka waraaqaha looga guddoomay safiirka ayaa waxaa goob joog ka ahaa General Maxamuud C/llahi Gaafow Agaasimaha hay’adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo Raage Cumar Cismaan xoghayaha labaad ee safaaradda JFS ee Cumaan.
Top News:- Odayaasha Balad xaawo oo ka horyimi darbiga udhaxayn doona Iyaga iyo Kenya
Qurbajoogta Galmudug oo so dhawaysay Dhismaha Dakada Hobyo iyo Airporka Oshaco
Haween Soomaaliyeed oo mareykanka ku sugan oo loo diidey in ay racfaan ka qaataan xukun horey loogu ridey, kadib markii………
admin 26th August 2015 27th August 2015
Mareykanka oo ka digay weerar la mid ah kii Westgate in Al-Shabaab ka geysato Nairobi
Tifaftiraha K24 15th December 2015
Dhageyso: Madaxweyne Xasan Shiikh oo hadal JEES JEES ah u diray Soomaalida ku xiran Nairobi , kuna ammaanay Kenya howlgalkeeda Nairobi.